Kumethusile ukwamukelwa ngabaculi - Ilanga News
Home Izindaba Kumethusile ukwamukelwa ngabaculi
Kumethusile ukwamukelwa ngabaculi
U-JU Jub une-themba lokuthi lokhu afuna uku-kwenzela iminde-ni yezingane eza-shona engozini eyadalwa nguyena kuzokwamukeleka kuyona.
UMANGALISWE wukwamukelwa ngomakadebona emculweni okubalwa kubo uBenjamin Dube no-Rebecca Malope uMolemo “Jub Jub” Maarohanye, kodwa wachithwa nguSjava (Jabulani Hadebe) noSomething Soweto (Lelethu Mdolomba) njengoba ebenza kabusha ingoma yakhe yodumo ethi “Ndikhokhele” okumanje ithakaselwa kakhulu okufakazelwa yizibalo zabantu asebeyilalele enkundleni yokuxhumana iYouTube.
Lo mculi obuye abe ngumethuli wezinhlelo, uthi ubenesibonakaliso mayelana nokubuyela kwakhe emculweni futhi kumele enze kabusha le ngoma kanti ubonisiwe nabaculi okumele ayivuse nabo.
Ekhuluma neLANGA lo mculi owaboshwa, wagwetshwa emuva kokuba edale ingozi eyabulala abafundi abawu-6 mhla ka-8 ku-Ndasa (March) 2010, uthe umbono ufike kwaze kwaba kabili ukuba enze kabusha le ngoma.
Uveze ukuthi yonke imali azoyenza ngale ngoma uzimisele ukuthi iye emindenini yalezi zingane ezashona ngesikhathi yena nomngani wakhe, uThemba Tshabalala babeqhudelana ngamaMini Cooper eProtea Glen, eSoweto.
Ngenxa yemibandela yokukhishwa kwakhe ejele, uthi akakwazi ukuxhumana nemindeni yezisulu kodwa unethemba lokuthi uma elandela imigudu efanele, uzokwazi ukuhlangana nayo akwazi ukuxoxa nayo.
“Nginethemba futhi nokuthi izokwamukela lokhu engifisa ukuyidlulisela khona,” kusho yena.
Ebuzwa ukuthi ubakhethe kanjani abaculi enze nabo le ngoma, uthe: “Ngibabonisiwe ephusheni abantu obekumele ngisebenze nabo kanti noma sengixhumana nabo akubanga nzima ukuba bavume ukuthi senze le ngoma.
“Kuthathe isikhathi esingangesonto ukuthi ingoma siyenze ize iphele ngoba bekunendlela ethile obekumele yenzeke ngayo.”
Kule ngoma usebenze noPastor Benjamin Dube, uRebecca Malope, uJudith Sephuma, uMlindo The Vocalist, yiBlaq Diamond, uLebo Sekgobela, uNathi Mankayi nomculi waseNigeria uT’kinzy.
Uthi kubelula ukusebenza nalaba baculi, kanti ukusho angananazi ukuthi kunozakwabo abangafuni lutho oluzobahlanganisa naye, kangangokuthi abanye kabavumanga ukusebenzisana naye.
“Bakhona abaculi engibaqondile ngacela ukusebenzisana nabo kodwa-ke bangavuma ngoba kulo mkhakha kusenabantu abakholwa wukuthi kumele bahambele kude nami.
“Phakathi kwabo kube nguSjava noSoweto Something. USjava ngimshayele izingcingo ngaze ngakhathala, okuthe uma ezwa ukuthi ngifunani kuye, wangavuma.
“ungimangalisile uPastor Benjamin Dube noRebecca Malope bavumele phezulu ukusebenza nami kodwa kubekhona abasangibambele amagqubu ngamaphutha ami akudala.
“Ngiyafisa abantu bakithi bafunde ukuthi kubalulekile ukuxolela ngezinye izikhathi,” kusho yena. Kubonakala abaningi beyithandile le ngoma yakhe njengoba bebeveza ezinkundleni zokuxhumana ukuthi yini abayithanda ngayo. Le ngoma isiyatholakala ezinkundleni ezahlukene ezidayisa umculo.
Previous articleUkhala ngosizi ejele ogile indodakazi
Next articleUmndeni usulibeke kuSenzo ithemba ngababulali